Usoro - CivilWorks - Geofumadas
Usoro - CivilWorks
Nke a bụ usoro emere iji mụta AutoCAD site na ncha. AutoCAD bụ sọftụwia kachasị ewu ewu maka iji kọmpụta enyere aka. Ọ bụ ikpo okwu bụ isi maka mpaghara dị ka injinịa obodo, ije, usoro eji arụ ọrụ yana ịme anwansị. Ọ bụ ezigbo ngwanrọ ịmalite, ịmara ụkpụrụ nke imewe wee tinye ya na sọftụwia pụrụ iche na ọzụzụ ...
Usoro - CivilWorks Usoro AutoCAD
Ihe, ebupụta na ntinye. Mụta imepụta atụmatụ na ọrụ linear na Autocad Civil3D sọftụwia etinyere na nyocha na arụ ọrụ obodo Nke a bụ nke mbụ nke usoro ọmụmụ anọ akpọrọ "Autocad Civil4D maka nyocha na arụ ọrụ obodo" nke ga - enyere gị aka ịmụ etu esi ejikwa ngwa ọrụ Autodesk a dị egwu. ma tinye ya na dị iche iche ...
Mgbakọ, na-ebupụta, akụkụ obe, cubing. Mụta ịmepụta atụmatụ na arụmọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na Autocad Civil3D sọftụwia etinyere na nyocha na arụ ọrụ obodo Nke a bụ nke abụọ nke usoro ọmụmụ anọ akpọrọ "Autocad Civil4D maka nyocha na arụ ọrụ obodo" nke ga - enyere gị aka ịmụ iji aka maka ngwanrọ Autodesk a ma tinye ya na dị iche iche ...